Jenesis 35 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Jọshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Sọlọmọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsị 1 Ndị Tesalonaịka 2 NdịTesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
35 E mesịa, Chineke gwara Jekọb, sị: “Bilie, gaa biri na Betel,+ wuokwara ezi Chineke, onye pụtara ìhè n’ihu gị mgbe ị nọ na-agba ọsọ n’ihi Isọ nwanne gị,+ ebe ịchụàjà n’ebe ahụ.” 2 Jekọb wee gwa ezinụlọ ya, gwakwa ndị niile ya na ha nọ, sị: “Tụfuonụ chi ndị mba ọzọ dị n’etiti unu,+ meekwanụ onwe unu ka unu dị ọcha, gbanweekwanụ ákwà mgbokwasị unu,+ 3 ka anyị bilie gbagoo Betel. N’ebe ahụ ka m ga-ewuru ezi Chineke, onye zara m n’ụbọchị m nọ n’ahụhụ,+ ebe ịchụàjà, n’ihi na ọ nọnyeere m n’ụzọ m jere ije na ya.”+ 4 Ha wee nye Jekọb chi ndị mba ọzọ niile ha ji,+ chịnyekwa ya ọla ntị ha kwụ ná ntị, Jekọb wee lie+ ha n’okpuru nnukwu osisi nke dị nso na Shikem. 5 E mesịa, ha kwaliri, oké ụjọ nke Chineke wee jide obodo ndị gbara ha gburugburu,+ nke mere na ha achụrụghị ụmụ Jekọb gawa. 6 N’ikpeazụ, Jekọb bịarutere Lọz,+ nke dị n’ala Kenan, ya bụ, Betel, ya na ndị niile so ya. 7 O wee wuo ebe ịchụàjà n’ebe ahụ wee malite ịkpọ ebe ahụ El-betel, n’ihi na ọ bụ n’ebe ahụ ka ezi Chineke kpugheere ya onwe ya n’oge ọ nọ na-agba ọsọ n’ihi nwanne ya.+ 8 E mesịa, Debora+ bụ́ nwaanyị nyere Ribeka ara nwụrụ, e wee lie ya n’ala ala Betel n’okpuru otu oké osisi. Ya mere, ọ kpọrọ ebe ahụ Alọn-bakọt. 9 Chineke wee pụta ìhè n’ihu Jekọb ọzọ n’oge o si na Padan-eram+ na-alọta wee gọzie ya.+ 10 Chineke wee sị ya: “Aha gị bụ Jekọb.+ A gakwaghị akpọ gị Jekọb, kama aha gị ga-abụzi Izrel.” O wee malite ịkpọ ya Izrel.+ 11 Chineke wee gwakwa ya, sị: “Abụ m Chineke bụ́ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.+ Mụọ ọmụmụ, baakwa ụba. Mba dị iche iche na ìgwè mba dị iche iche ga-esikwa na gị pụta, ndị eze ga-esikwa n’úkwù gị pụta.+ 12 Ma ala ahụ m nyere Ebreham na Aịzik, ọ bụ gị ka m ga-enye ya, ọ bụkwa mkpụrụ+ gị nke ga-anọchi gị ka m ga-enye ala ahụ.”+ 13 E mesịa, Chineke si n’ebe Jekọb nọ, n’ebe ahụ ya na ya kwurịtara okwu, gbagoo.+ 14 N’ihi ya, Jekọb guzobere otu ogidi, bụ́ ogidi nkume, n’ebe ahụ ya na ya kwurịtara okwu,+ o wee wụsa àjà ihe ọṅụṅụ n’elu ya, wụsakwa mmanụ n’elu ya.+ 15 Jekọb wee na-akpọ ebe ahụ, bụ́ ebe ya na Chineke kwurịtara okwu, Betel.+ 16 Ha wee si na Betel kwalie. Mgbe ụzọ ka dị anya tupu e ruo Efrat,+ Rechel malitere ịmụ nwa, ọ nọkwa na-esiri ya ike ịmụpụta ya.+ 17 Ma o ruru na mgbe o siiri ya ike ịmụpụta nwa ahụ, nwaanyị na-aghọ́ nwa sịrị ya: “Atụla egwu, n’ihi na ị ga-amụkwa nwa nwoke nke a.”+ 18 Ihe si na ya pụta bụ na ka ndụ*+ ya pụwara (n’ihi na ọ nwụrụ),+ ọ gụrụ ya Ben-onaị; ma nna ya gụrụ ya Benjamin.+ 19 Rechel wee si otú ahụ nwụọ, e wee lie ya n’ụzọ gara Efrat, ya bụ, Betlehem.+ 20 Jekọb wee guzobe otu ogidi n’elu ili ya. Ọ bụ nke a bụ ogidi ili Rechel ruo taa.+ 21 E mesịa, Izrel kwaliri wee maa ụlọikwuu ya ma a gafetụ ụlọ elu Ida.+ 22 O wee ruo mgbe Izrel bi n’ụlọikwuu+ n’ala ahụ na Ruben gara otu mgbe dinaa Bilha iko nna ya, Izrel wee nụ ya.+ Ụmụ ndị ikom Jekọb dị mmadụ iri na abụọ. 23 Ụmụ ndị ikom Lia mụrụ bụ Ruben bụ́ ọkpara+ Jekọb nakwa Simiọn na Livaị na Juda na Ịsaka na Zebulọn. 24 Ụmụ ndị ikom Rechel mụrụ bụ Josef na Benjamin. 25 Ụmụ ndị ikom Bilha, bụ́ nwaanyị na-ejere Rechel ozi, bụ Dan na Naftalaị. 26 Ụmụ ndị ikom Zilpa, bụ́ nwaanyị na-ejere Lia ozi, mụrụ bụ Gad na Asha. Ọ bụ ndị a bụ ụmụ ndị ikom Jekọb, ndị a mụụrụ ya na Padan-eram. 27 N’ikpeazụ, Jekọb lọkwutere Aịzik nna ya na Mamri,+ na Kiriat-aba,+ ya bụ, Hibrọn, bụ́ ebe Ebreham na Aịzik biri dị ka ndị ọbịa.+ 28 Ụbọchị Aịzik dịrị ndụ wee bụrụ otu narị afọ na iri asatọ.+ 29 E mesịa, Aịzik kubiri ume wee nwụọ, e wee lie ya dị ka e liri ndị ya, o mere agadi, ụbọchị ndụ ya jukwara ya afọ,+ Isọ na Jekọb bụ́ ụmụ ya wee lie ya.+
^ Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ “mkpụrụ obi.”